Muslimiinta Sweden oo si adag udifaacay Kitaabka Qur'aanka ee lagu xadgudubay.
Thursday April 21, 2022 - 19:13:52
Wadanka Sweden wali waxaa ka jira dibad baxyo ballaaran oo ay dhigayaan jaaliyadaha muslimiinta ee difaacaya musxafka qur'aanka kariimka ah ee ay gaaladu ku xadgudbeen.
Tobanaan kun oo kamid ah muslimiinta ku dhaqan Sweden ayaa iska hor'imaadyo halyaynimo kula jira ciidamada booliska ashahaadda ladirirka wadankaas ee difaacaya Ninka xagjirka saliibiga ah ee u gefay kitaabka qur'aanka kariimka.
Warbixin kasoo baxday wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda Stockholm ayaa lagu sheegay in khasaara maaliyadeed oo baaxad leh uu ka dhashay wax ay ugu yeertay rabshadaha ay dhigayaan muslimiinta.
wasiirka cadaaladda Sweden ayaa shir saxaafadeed ku sheegay in 26 katirsan ciidamada booliska ay si xun ugu dhaawacmeen iska hor'imaadyo ay lagaleen dadka muslimiinta ee ka caraysan tallaabada uu siyaasiga xagjirka ah ku gubayay nuskhooyin kamid ah Qur'aanka..
Warbixinta ayaa lagu sheegay in 14 kamid ah muslimintii dibad baxyada dhigayay ay dhaawacyo soo gaareen halka ciidanka booliska laga gubay 20 gaari, dibad baxyada ugu waaweyn waxay ka dhaceen magaalada Malmo oo ay ku noolyihiin boqolaal kun jaaliyado muslimiin ah iyo magaalada kale ee Gothenburg.
Raasmoos baloodaan oo ah siyaasi xagjir ah oo sanaddii 2017 aas -aasay xisbiga midigta fog ee islaam naceybka ku caanbaxay Taraamkoos ayaa yeeriyay seeriga dagaalka kadib markii uu bishaan gudaheeda goob fagaare ah ku gubay kitaabka qur'aanka kariimka kadibna uu iclaamiyay madal wadareed lagu gubayo musxafka arrinkaas oo ka caraysiiyay muslimiinta caalamka.
Xaaladda ayaa sii adkaatay kadib markii ay dowladda Sweden ay sheegtay in ay taageerayso baaloodan waxa uu sameeyayna ay qeyb ka yihiin xuriyadda hadalka, magaalooyinka Sweden ayaa gilgilanaya waxaana iskasoo daba dhacaya dhaleecaymaha ay dowladdani kala kulmayso caalamka.
Sirdoonka Turkiga oo fashiliyay weerar lagu beegsan lahaa dalxiisayaal Yahuud ah.